Sven-Goran Eriksson Oo Ugu Baaqay Steven Gerrard Inuu Isaga Tago Kooxda Liverpool. - jornalizem
Sven-Goran Eriksson Oo Ugu Baaqay Steven Gerrard Inuu Isaga Tago Kooxda Liverpool.
Tababarihii hore ee xulka qaranka England Sven-Goran Eriksson ayaa ugu baaqay kabtanka Liverpool inuu isaga tago kooxda Liverpool.
Eriksson, oo aan wax shaqo ah haayin tan iyo intii uu ka tagay Leicester City sannadkii hore, ayaa uga digay 32 jirkaan inuu dhaqso talaabo qaado hadii uu doonayo inuu qaado Premier League ka hor inta uusan mustaqbalkiisa ciyaareed soo dhamaan.
“Steven Gerrard waa Mr Liverpool waxaana uu ku guuleystay Champions League, Super Cup, FA Cup iyo League Cup oo uu Liverpool la qaaday” ayuu yiri Eriksson, sida ay qortay website-ka TV-ga Eurosport.
“Lakiin su’aasha waxa ay tahay hadii uu waligiisna ku guuleysan doono Premier League. Sida ay haatan wax u egyihiin, marnaba kuma guuleysanayo.
“Waa inay wax badan iska bedelaan Liverpool hadii ay taasi dhaceyso.
“Milkiilayaasha waa inay lacag geliyaan kooxda oo soo iibiyaan ciyaartoy ku fiican kooxda. Andy Carroll iyo Stewart Downing waxa ay ahaayeen labo ciyaaryahan oo lacag qaali ah laga soo bixiyay, lakiin kuma aysan soo bixin shaqadooda intii ay xirnaayeen maaliyada gaduudan.
“Marka aan maanta kooxdooda fiiriyo waxaan arkaa kaliya seddex xiddig oo waa weyn: Pepe Reina, Gerrard iyo Luis Suarez.
“Iyaga la’aantooda booska Champions League aad ayuu uga sii fogaanayaa. Ma doonayo in ciyaaryahan u fiican sida Steven inuusan horyaal ku guuleysan. Lakiin waxa uu malaha u baahan yahay inuu koox bedesho hadii uu doonayo inuu horyaal ku guuleysto.”
Eriksson ayaa intaas raaciyay in talada uu siinayo Gerrard inaysan aheyn naceyb uu u qabo kooxda ka dhisan Anfield.
“Aniga iyo aabaheey waxaan aheyn taageerayaal Liverpool tan iyo 1980aadkii” ayuu yiri.
“Lakiin Liverpool-sha aan aragno waa ay ka fog tahay meel sarre.”